Kusho ukuthini ushintsho lwe-sola? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki amanothi promissory
amanothi promissory (Yaziwa nangokuthi promissory amanothi) isithembiso yokubopha umkhiphi ngosuku elicacisiwe exchange ukukhokha isamba elicacisiwe imali exchange kuya Wechselnehmer. Ulwazi we-akhawunti ahlobene at izinguquko zabo, kunokuba isitatimende isithembiso olungenamkhawulo ukukhokha Exhibitor.I exchange kunikezwa. Ngenxa yalesi sizathu, hhayi izinhlinzeko zoMthetho bill zokwenana (ukwamukelwa) wasayina maqondana nokwamukelwa, kodwa amalungiselelo lomthetho amanothi promissory sebenzisa zisebenze amanothi promissory. Amabhange asebenzisa ukushintshaniswa kwe-sola ukuze aqinisekise izimangalo zabo ngokumelene nomkhipha. Ukushintshaniswa kwe-sola akuhloswe ukusabalalisa futhi ngakho-ke kungakhululwa njengento edinga ibhange ngokushesha. I siqu promissory amanothi esetshenziswa izikweletu ngezimali, ngoba umnikazi we Bill avele ezinye izingozi, okungukuthi ingozi amanothi promissory a ngongakwazi ukukhokha izikweletu okungenzeka okweletayo ukuhlangana. Ngokuvamile, isikhathi sokukhokha sezinyanga ezintathu kuvunyelwene a baphathe-phezu inganwetshwa. Ingozi iphinde ikhona uma umthengi othengiswa ngemali ebizwa ngokuthi umthengisi oye wabiza umthengisi usehlise ukuguqulwa kwesola endlini yakhe. Uma kwenzeka ukungeniswa okungazelelwe komuntu obolekisayo, umkhiphayo ubophezelekile ukuba athathe inkokhelo ehlangene ngokusebenzisa i-avalanche yakhe. Umamukeli wenguquko ye-sola angayamukela lokhu njengendlela yokukhokha futhi kamuva ayihlenge ebhange. Inani elifanele lemali, okumele kukhulunywe ngalo kumthethosivivinywa wokushintshaniswa, kuthiwa yi-bill of exchange, kanti umbukiso ubhekene nayo ngesikhathi esisodwa.
Leli nothi promissory sisebenza a "ungumkhohlisi" futhi ngeke angene force ngosuku bavumelana phakathi (igama umbolekisi ngabanye) noma nezinkampani okuye ifakwe ngaphansi kwemithetho (State) ukanye endlunkulu (igama lenkampani kanye nekheli ephelele) futhi (igama lenkampani yabo njengoba umboleki kanye ikheli eliphelele. ukucabangela njengoba esifanele umboleki osayine uthembisa severally ukukhokha umbolekisi isamba (nenani eliqondile)] ngesithakazelo yonyaka ka (interest rate). yonke imali ebolekiwe futhi inzalo enqwabelene, kuncike Ubude bokubolekwa kwemali mboleko buzobekwa ngokugcwele futhi ngokushesha futhi bukhokhwe ngesicelo somboleki.
Iziphi izizathu zokuthi ushintshe iSola?
Izizathu kubo lolo shintsho, kukhona abanye, isukela nethemba yokonga ezithile izindleko kuze kube isevisi Consulting esibanzi olunikezwa isikhungo sezezimali abafanele eyicela. Kulesi hlobo ushintsho yasebhange izinto ezahlukene cabanga, ikakhulukazi uma mortgage asikapheleli, uhlale zixwayisa ngesikhathi ushintsho yasebhange: Ngemuva kokuphela egxilile zenzalo ushintsho olunjalo ezimweni ezimbalwa kungase kube ngcono ngoba lo okwengeziwe ukwakhiwa ngezimali. Baxoxisane nebhange lakho mayelana izimo ezifanele, ukuthola ukuqaphela Alternative inikeza nezinye izinhlangano zezimali ukuze ke ukuxoxisana kamuva ebhange. Isu lisikisela ukuthi uzitshela izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuphela kwezivumelwano zesivumelwano. Lapho ubhekene nokuncintisana kwe-intanethi, amabhange amaningi asekhaya azimisele ukudayisa nabo ukuze bathole ukusebenzisana okuhle. Isilinganiso senzalo nomehluko beat nganoma loan okusezingeni eliphezulu amanani kakhulu beech, okusalungiswa yasebhange Ungakwazi futhi Nokho kuvuse izindleko ezengeziwe ngesikhathi ngezimali ukwakhiwa, uma ibhange entsha kufanele zibhaliswe njengoba abakweletwayo esizayo irejista umhlaba futhi nezindleko for ukubhaliswa ummeli olungisa izivumelwano kanye umhlaba.
Isihloko esilandelayoukubhuka mortgage